Webmasters Nightmare na ahoana no atao amin'ny Bots - Semalt Expert
Toy ny loza hafa amin'ny fiarovana, dia lasa olana lehibe ho an'ny webmasters ny bots. Maro ny olona mampiasa ny programa anti-malware sy ny antibiotika mba hanaisotra ireo aretina ireo. Ny famandrihana ny rindrankajin'ny rindrambaiko ary ny fahafantaranao ny karazam-pandaharana mety ho anao dia tsy maintsy mitandrina ny rafitra misy anao. Saingy rehefa mitranga ny endriny dia tokony hampitahao baselines isan-karazany mba hahafantarana izay mety indrindra amin'ny fitaovana misy anao. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny fanamarinana sy ny fanombanana ny rafitrao tsara mba hahafantarana raha mahazo bot ianao na tsia. Ity no fomba hitadiavana sy hanesorana ireo botsika amin'ny ankapobeny.
Sokafy programa fanoherana malware
Mety ho tsara raha mandrindra programa manohitra ny malware ianao. Ny fitadiavana fandaharana toy izany amin'ny aterineto dia mora. Mila mandefa ny dikan-tenany farany ianao, ary ny programa tsara indrindra alefa dia ny EyeBlink. Ity rindrambaiko ity dia tsara ho an'ny orinasa madinika. Julia Vashneva, Semalt Senior Manager Success Manager, dia manana traikefa manokana fa ity programa ity dia afaka mahita sy manala malware sy bots amin'ny ordinateranao. Be dia be ny programa sy rindrambaiko maimaim-poana ao amin'ny aterineto, saingy ity programa ity dia tsy maimaim-poana, ary tsy maintsy mandoa lamandy ianao mba hahazoana ny endri-javatra rehetra.
Raha tsy liana amin'ny fampiasana ilay programa voalaza etsy ambony ianao, dia azonao atao ny maka sary an-tsehatra avy amin'ny fialan-tsasatra..com na tranonkala iray mitovy. Ny fandraketana sy ny fametrahana ity fitaovana ity dia tsy haka fotoana ampy. Tsy maintsy manao sonia fotsiny ianao ary mamorona kaonty ao amin'ilay tranonkala. Raha vantany vao vonona ilay kaonty, azonao atao ny maka azy io ary ampidiriny ao.
Jereo ny fanovana nataon'ny Firewall
Tokony hijery matetika ianao ny fandaharam-pampandrosoana firewall ahafantarana raha toa ka efa miasa tsara ny fampiharana na tsia. Zava-dehibe ho anao ny manara-maso sy manitsy ny sehatra tsy tapaka. Esory ny fitsipika firewall ary aza hadino ny mamonjy ny fanovana alohan'ny hanakatonana ny varavarankely.
Jereo ny rakitra miaina
Mandehana any amin'ny fiara C an'ny solosainao ary tsindrio ny rakitra Host. Botso isan-karazany dia manoratra indray ireo rakitra tompon-daka ireo mba handikana ny solosainao manokana amin'ny fifandraisana amin'ny adiresy IP tsy nahazo alalana avy amin'ny mpizara. Tsy maintsy mitandrina ianao rehefa mifandray amin'ny Internet ary maka antoka fa mifandray amin'ny adiresy nomena anao ihany ary ankatoavina. Izany dia hanakana ny solosainao tsy ho simba amin'ny malware sy bots. Raha mahita zavatra mampiahiahy ianao, dia tsy maintsy manamboatra kopian'ny tahiry Host, ary mamafa ireo zavatra mampiahiahy ary mamonjy ny safidinao haingana araka izay azo atao.
Mampiasa Manager Windows Task
Tokony hampiasa Windows Task Manager na ny Process Explorer SysInternal hamandrihana ny solosainao amin'ny malware sy bots. Noho izany, tokony hamaha ny rakitra aloha ianao ary manala ireo bots. Plus, tokony hanakana ny adiresy IP izay mitady vaovao sy tsy ara-dalàna. Raha mbola mitohy ny zavatra mampiahiahy dia ataovy ny lisitr'izy ireo ary alao haingana araka izay azo atao avy ao amin'ny fitaovana izy ireo.
Fikarohana ny tranokala
Farany, azonao atao ny mikaroka ny tranonkala ho an'ny dingana mety amin'ny fomba hanesorana bots. Ny fanesorana azy ireo dia sarotra ho an'ireo tsy mahafantatra ny programan'ny Antivirus sy ny programa malware Source .